Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Kedu ebe kachasị ndị njem nleta mara mma?
Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ndị njem nlegharị anya kacha mma
A bịa na njem mba ofesi, ọ bụ ogologo oge, yana ikekwe na -ezighi ezi, stereotype na ndị njem nlegharị anya America abụghị ndị njem nlegharị anya kachasị mma, na -enwe obere mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ejiri mara oke egwu. Echiche a nwere ike na-agbanwe n'oge COVID-COVID, ebe ndị mba ụwa na-achọ ndị njem America.
Ị maara na ndị si na Hong Kong na -akpọ asị ka a na -eleda ya anya?
Ma ọ bụ na onye Japan na -amụmụ ọnụ ọchị anaghị enwe obi ụtọ?
Mmegharị aka ma ọ bụ ikwu okwu adịghị mma nwere ike ime ka ọnọdụ njem jọrọ njọ.
Were akwụkwọ ntuziaka njem ọ bụla, o yikarịrị ka ị ga-ahụ ngalaba ewepụtara maka ụdị ọdịbendị akọwapụtara nke ị ga-eme nke ọma ịmụ tupu ịmalite njem nke ọtụtụ ebe. Mana kedu ka ndị America na -eme n'ime oke ala ya? Webụsaịtị nkwekọrịta ezumike, NextVacay.com, chepụtara “ndebanye aha maka njem nlegharị anya” iji chọpụta, steeti site na steeti, nke ndị America nwere aha kacha mma na nke kacha njọ mgbe ha na -ezumike n'ụlọ.
Ha nyochara mmadụ puku atọ wee rịọ ndị na-aza ajụjụ ka ha nyochaa ịdị mma nke ndị njem nlegharị anya na nha site na 3,000 ruo 1. Achọpụtara na ndị njem nlegharị anya kacha asọpụrụ sitere Alaska, na-ewere 10/8 siri ike maka omume njem ha. N'ịbụ onye a maara dị ka onye tọgbọrọ chakoo, ọ nwere ike ọ bụghị ihe ijuanya na ndị njem Alaska nọ n'ọkwa dị elu - ndị ezigbo mmadụ nke Ikpeazụ Frontier makwara ka esi eme njem - Alaska Interstate highway system nwere naanị okporo ụzọ anọ, yabụ na ha maara nke ọma inwe iji megharịa atụmatụ njem na -enweghị mkpesa ọ bụla.
Hawaii nọ n'ọnọdụ nke abụọ
Nke a nwere ike ọ bụghị ihe ijuanya ebe ọ bụ na ama steeti a maka ya Aloha Mmụọ nke na -awụsa ndị njem nleta ahụ. Kedu otu ọ ga -esi bụrụ ebe ọjọọ ebe a ga -eji okooko osisi okooko osisi ekelee gị na ndị bi ebe ahụ nwere obi ụtọ inye aka na ntụzịaka na ntụnye, ha niile nwere “Enweghị nchekasị” dị ka akụkụ nke nduzi ha? Enwere ezi ihe kpatara eji akpọ ya Paradaịs.
Ndị njem nlegharị anya kacha nta
Ihe karịrị 1 n'ime 3 na -ekwu na ha nwere ezumike mebiri site n'omume ọjọọ nke ndị njem nleta ndị ọzọ. Agbanyeghị, ndị njem nlegharị anya kacha mma bụ ndị si na steeti Washington, bụ ndị họọrọ naanị 4 n'ime 10. Ọ bụ ezie na Evergreen State nwere ike na-ebute ọkwa mgbe niile ma a bịa steeti ndị na-eme gburugburu ebe obibi, aha ọma ya ma a bịa n'ịdị mma na-ewere nnukwu mmụba. . Dabere na nyocha emere na 2019, ihe karịrị ọkara ndị bi na Pacific Northwest achọghịdị ịgwa ndị ha na -amabughị okwu nkenke. Ọ na -enye ntụkwasị obi maka ihe a maara dị ka "Seattle Freeze" - nke na -ezo aka na nkwenye zuru ebe niile na ọ na -esiri ike imeta ndị enyi ọhụrụ na obodo Washington nke Seattle. Ọ bụrụ na ha na ụmụnne obodo ha adịghị emekọrịta nke ọma, ọ nwere ike ọ bụghị ihe ijuanya na ha anaghị ahụ ndị obodo si steeti ndị ọzọ n'anya mgbe ha na -eme ezumike. Dịkwa ka enweghị nsọpụrụ, ndị njem si Connecticut họọrọ 4 n'ime 10.
Ndekọ Njem Nleta Ndị Njem Nleta Anya
Ọ na -egosikwa na ndị Amerịka anaghị ele ndị obodo ha anya mgbe ha na -eme njem na mba ofesi. Ihe na -erughi ọkara na -eche na ndị njem nlegharị anya America na mba ofesi nwere nkwanye ugwu, yabụ, anaghị anọchite anya obodo ha nke ọma - nke na -emetụta oke pasent 68 nke ndị nabatara ikwupụta na ha ga -ezere ịga ebe ọzọ ma ọ bụrụ na ha maara na ha nwere aha ọjọọ mara. Ebe ahụ.
Na nso ụlọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (pasent 42) nke ndị nyochara bi na ebe ndị njem nlegharị anya kwuru na ha ga -apụ (ma ọ bụrụ na ha nwere ike) maka oge ezumike, naanị iji zere ndị njem. Na otu onye n'ime mmadụ 1 zara ajụjụ kwuru na ha enwela mmetụta ezumike ezumike ụlọ n'ihi omume ọjọọ nke ndị ezumike ọzọ. N'ezie, enwere ike nwee oge pụrụ iche n'afọ-dị ka oge ezumike opupu ihe ubi-nke ahụ nwere ike ịdọta ndị njem nlegharị anya na-adịghị mma.
N'agbanyeghị ụdị echiche ọ bụla, ọ bụ ihe na -agba ume na pasent 82 nke ndị njem nlegharị anya America na -ekwu na ha ga -agbaso usoro iwu COVID mgbe ha na -eme njem na mba ofesi, dị ka iyi nkpuchi na ịdịpụrụ adịpụ ọha.
N'ikpeazụ, pasent 38 kwetara na ha na -atụ uche America n'ezie mgbe ha nọ na mba ofesi.